Baby boy ezigqokisa osayizi wokubala inthanethi, wokubala inthanethi, converter
Baby boy ezigqokisa osayizi wokubala inthanethi ikuvumela ukuba uthole futhi ukuguqula baby boy ezigqokisa ezinobukhulu American, British, European, ezinobukhulu Russian, esifubeni nobubanzi nokuphakama kwawo ngamasentimitha, noma ubudala womfana.
Baby boy ezigqokisa osayizi wokubala inthanethi ikuvumela ukuba ukuguqula usana lomfana ezigqokisa ezinobukhulu American, British, European, ezinobukhulu Russian, esifubeni nobubanzi nokuphakama kwawo ngamasentimitha, noma ubudala womfana. Ngokwesibonelo, ukuguqula izingubo osayizi for abafana kusukela American European, kusukela waseBrithani njll Russian Futhi ungakwazi ukubona ingane yomfana ezigqokisa osayizi ishadi, ne osayizi ezinkulu nezincane.
Izingubo for abafana
Inguqulela izingane waphi emasayizi kwamanye amazwe, njenge-European, British, American (USA), ezinobukhulu Japanese noma ngamasentimitha.
Iqukethe abafana ezinkulu nezincane izingubo ishadi osayizi emazweni ahlukene.